Ikike na ikike na Linux | Site na Linux
Perseus | | Ndị ọzọ
Mmadu ole n’ime anyi nwere “mkpachapu ohere” na faịlụ ndi di n’ime akwukwo / folda ma obu anyi choro igbochi ufodu ndi mmadu ilele, ihichapu ma obu megharia ihe n’ile faịlụ? Karịa otu, nri? Anyị enwere ike ịnweta ya na penguin anyị hụrụ n'anya? Azịza ya bụ: N'ezie ee : D.
Ọtụtụ n'ime anyị sitere na Windows, ka ejiri mee ihe banyere "nsogbu" a n'ụzọ dị iche, iji mezuo ebumnuche a anyị ga-abanye na "usoro" na-ekweghị ekwe, dịka ịzobe faịlụ ahụ site na njirimara ya, na-ebugharị anyị ozi gaa ebe kachasị dịpụrụ adịpụ nke otu anyị (n'ime folda 20,000) iji gbalịa imebi "onye iro" anyị XD, na-agbanwe ma ọ bụ wepu mgbatị faịlụ, ma ọ bụ omume "kachasị" nke omume, budata mmemme nke na-enye anyị ohere " mechie ”ndekọ anyị n’azụ igbe dị mma nke na-ajụ anyị maka paswọọdụ iji nweta ya. Anyị nwere nhọrọ ka mma karịa? Mba.
Etu esi ebuputa HDD ma obu uzo site na onu
O wutere m nke ukwuu maka ndị enyi m "Windolero" (ana m eji oke ịhụnanya ekwu ya ka onye ọ bụla wee ghara iwe iwe, ọ dị mma; amaala arụmọrụ a.
Ole n’ime unu achọpụtala na mgbe anyị anọdụ ala n’azụ kọmputa “Windows” (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke anyị) anyị ga-abụrịrị ndị nwe ihe niile kọmputa ahụ nwere (onyonyo, akwụkwọ, mmemme, wdg)? Gịnị ka m na-ekwu? Ọ dị mma, naanị site na ịnara "njikwa Windows", anyị nwere ike idetuo, megharia, hichapụ, mepụta, mepee ma ọ bụ gbanwee nchekwa na faịlụ aka ekpe na aka nri, n'agbanyeghị na anyị bụ "ndị nwe" ozi a ma ọ bụ na anyị abụghị. Nke a na-egosipụta ogwe nchekwa dị ukwuu na sistemụ arụmọrụ, nri? Ọfọn, nke a bụ n'ihi na e meghị sistemụ arụmọrụ Microsoft site na ala ruo ọtụtụ ndị ọrụ. Mgbe ewepụtara nsụgharị nke MS-DOS na ụfọdụ nsụgharị nke Windows, ha tụkwasịrị obi n'ụzọ zuru ezu na onye ọrụ njedebe ga-ahụ maka "ịchekwa" kọmputa ha nke mere na ọ nweghị onye ọrụ ọzọ nwere ohere ịnweta ozi echekwara na ya ... go toive ¬ ¬. Ugbu a ndị enyi WinUsers, ị maraworị ihe kpatara "omimi" a: D.
N'aka nke ọzọ, GNU / Linux, ịbụ sistemụ emebere maka ịkparịta ụka n'ingntanet, nchekwa nke ozi anyị na-echekwa na kọmputa anyị (ịghara ịkọwa sava) bụ isi, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ ga-enwe ma ọ bụ nwee ike ịnweta akụkụ nke ngwanrọ ngwanrọ (ma ngwa ma ozi) yana akụrụngwa ndị a na-ejikwa na kọmputa ndị a.
Ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ihe kpatara mkpa maka sistemụ ikike? Ka-esi n'ime isiokwu;).
DU: otu esi ele akwụkwọ ndekọ 10 nke were ohere kachasị
Na GNU / Linux, ikikere ma ọ bụ ikike ndị ọrụ nwere ike ịnwe karịa ụfọdụ faịlụ dị na ya bụ ntọala atọ dị iche iche n'ụzọ doro anya. Atọ ndị a dị ka ndị a:
<° Ikike nke onye nwe ya.
<° Ikike otu.
<° Ikike nke ndị ọrụ ndị ọzọ (ma ọ bụ kpọkwara "ndị ọzọ").
Iji doo anya banyere echiche ndị a, na sistemụ ntanetị (dịka penguuin) enwere ọnụọgụ nke onye nchịkwa, superuser ma ọ bụ mgbọrọgwụ. Onye nchịkwa a na-ahụ maka ịmepụta na iwepu ndị ọrụ, yana ịtọlite ​​ikike nke onye ọ bụla n'ime ha ga-enwe na sistemụ ahụ. A na-ahazi ikike ndị a maka akwụkwọ ndekọ aha userlọ nke onye ọrụ ọ bụla yana maka ndekọ na faịlụ ndị onye nchịkwa kpebiri na onye ọrụ nwere ike ịnweta.
Onye nwe ya bụ onye ọrụ nke na - ewepụta ma ọ bụ mepụta faịlị / folda n'ime ndekọ ndekọ ọrụ ha (HOME), ma ọ bụ na ndekọ aha ndị ọzọ nke ha nwere ikike. Onye ọrụ ọ bụla nwere ikike ịmepụta, na ndabara, faịlụ ndị ha chọrọ n'ime ndekọ ndekọ ọrụ ha. Na ụkpụrụ, ya na naanị ya ga-abụ onye nwere ike ịnweta ozi dị na faịlụ na ndekọ aha na ndekọ ụlọ gị.
Ihe kachasị mma bụ na onye ọrụ ọ bụla nwere otu ọrụ. N'ụzọ dị otú a, mgbe a na-achịkwa otu otu, ndị ọrụ niile so na ya na-achịkwa ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dị mfe ijikọ ọtụtụ ndị ọrụ n'ime otu ndị enyere ikike ụfọdụ na sistemụ ahụ, karịa ịnye ndị ọrụ ọ bụla otu onye ọrụ ọ bụla.
Ikike nke ndị ọrụ ndị ọzọ
N'ikpeazụ, ikike nke faịlụ ndị dị na ndekọ ọ bụla nwekwara ike ijide ndị ọrụ ndị ọzọ na-esoghị na ngalaba ọrụ nke faịlụ ahụ metụtara. Yabụ, a na-akpọ ndị ọrụ na-esoghị na ngalaba ọrụ nke faịlụ ahụ dị, mana ndị so na otu ọrụ ọrụ ndị ọzọ.
Ọ dị ezigbo mma, mana olee otu m ga-esi amata ihe a niile? Dị mfe, mepee ọnụ ma mee ihe ndị a:
Cheta na: ha bụ mkpụrụedemede nta "L" case
Ọ ga-apụta ihe dị ka ndị a:
Dịka ị pụrụ ịhụ, iwu a na - egosiputa ma ọ bụ "depụta" ọdịnaya nke ụlọ m, ihe anyị na-eme bụ ahịrị uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Igbe uhie na-egosi anyị onye bụ onye nwe ya na igbe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egosi otu otu faịlụ na nchekwa ndị edepụtara n'elu bụ nke. N'okwu a, akpọrọ onye nwe ya na otu ahụ "Perseus", mana ha nwere ike zute otu ọzọ dị ka "ahịa". Maka ndị ọzọ, echegbula onwe gị ugbu a, anyị ga-ahụ n'ọdịnihu: D.
Ofdị ikikere na GNU / Linux
Tupu ị mụta otu esi etinye ikikere na GNU / Linux, anyị ga-amarịrịrịrị otu esi enwe ụdị faịlụ dị iche iche nke sistemụ ahụ nwere ike ịdị iche.
Achọpụtara faịlụ ọ bụla na GNU / Linux site na mkpụrụ edemede iri, nke akpọrọ nkpuchi. N'ime mkpụrụ edemede iri a, nke mbụ (site n'aka ekpe gaa n'aka nri) na-ezo aka n'ụdị faịlụ ahụ. 10 na - esote, site n'aka ekpe gaa n'aka nri na nkanka nke 9, na-ezo aka na ikikere enyere, karị, onye nwe ya, otu ya na ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ọzọ. Nseta ihuenyo iji gosipụta ihe a niile:
The akpa agwa nke faịlụ nwere ike ịbụ ndị na-esonụ:
b Pụrụ iche Block File (Ngwaọrụ Pụrụ Iche faịlụ)
c Ihe odide pụrụ iche (ngwaọrụ tty, onye nbipute ...)
l Njikọ faịlụ ma ọ bụ njikọ (njikọ dị nro / nke akara)
p Channel pụrụ iche faịlụ (anwụrụ ma ọ bụ anwụrụ)
Ihe odide itoolu na-esote bụ ikikere enyere ndị ọrụ sistemụ. Edere edemede atọ ọ bụla, onye nwe ya, otu ya na ikikere ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ihe odide nke na-akọwa ikikere ndị a bụ ihe ndị a:
- Enweghị ikike
r Gụọ ikike
w Dee ikike
x Ikike ikike
<° Agụ: isi na-enye gị ohere ịlele ọdịnaya nke faịlụ ahụ.
<° Dee: na - enye gị ohere igbanwe ọdịnaya nke faịlụ ahụ.
<° Mmezu: na-enye ohere ka faịlụ ahụ gbuo dị ka a ga - asị na ọ bụ mmemme mmemme.
Akwụkwọ ndekọ aha gị
<° Gụọ: Ọ na-enye ohere ịmara ụdị faịlụ na ndekọ aha ndekọ aha nke nwere ikike a.
<° Dee: na - enye gị ohere ịmepụta faịlị na ndekọ aha, ma ọ bụ faịlị nkịtị ma ọ bụ ndekọ ọhụụ. Nwere ike ihichapụ akwụkwọ ndekọ aha, detuo faịlụ na ndekọ na, megharia, nyegharịa, wdg.
<° Mmezu: na-enye gị ohere ịgafe akwụkwọ ndekọ aha iji nwee ike inyocha ọdịnaya ya, detuo faịlụ site na ma ọ bụ ya. Ọ bụrụ n’ị gụwo ma dekwa ikikere, ịnwere ike ịrụ ọrụ niile ga - ekwe omume na faịlị na akwụkwọ ndekọ aha.
Cheta na: Ọ bụrụ n’inweghị ikike igbu ahụ, anyị agaghị enwe ike ịnweta ndekọ ahụ (ọbụlagodi ma anyị jiri iwu “cd”), ebe ọ bụ na a ga-agọnahụ ọrụ a. Ọ na-enyekwa ohere ịdebe ojiji nke ndekọ dị ka akụkụ nke ụzọ (dị ka mgbe anyị gafere ụzọ nke faịlụ dị na ndekọ ahụ dị ka ntụnye aka. Were ya na anyị chọrọ i copyomi faịlụ ahụ "X.ogg" nke dị na folda ahụ " / home / perseo / Z ”-nke folda“ Z ”enweghị igbu ikike-, anyị ga-eme ndị na-esonụ:
site na inweta ozi ezighi ezi na-agwa anyị na anyị enweghị ikikere zuru ezu iji nweta faịlụ ahụ: D). Ọ bụrụ na agbanyụọ ikike igbu akwụkwọ ndekọ, ị ga-enwe ike ihu ọdịnaya ya (ọ bụrụ na ịgụla ikike), mana ị gaghị enwe ike ịnweta ihe ọ bụla dị na ya, n'ihi na ndekọ a bụ akụkụ nke ụzọ dị mkpa iji dozie ọnọdụ nke ihe gị.
Nchịkwa ikike na GNU / Linux
Ruo ugbu a, anyị ahụla ihe ikikere bụ maka anyị na GNU / Linux, ọzọ anyị ga-ahụ otu esi ekenye ma ọ bụ wepụ ikikere ma ọ bụ ikike.
Tupu ịmalite, anyị ga-eburu n'uche na mgbe anyị debanyere aha ma ọ bụ mepụta onye ọrụ na sistemụ, anyị na-enye ha ohere na akpaghị aka. N'ezie, ikike ndị a agaghị ezu, ya bụ, ndị ọrụ agaghị enwe ikikere na ikike nke onye isi ala. Mgbe onye ọrụ ahụ kere, usoro site na ndabara onye ọrụ ùgwù maka faịlụ management na ndekọ na ndekọ. N’ụzọ doro anya, ndị nchịkwa nwere ike gbanwee nke a, mana sistemụ ahụ na-ewepụta ọhere dịkarịsịrị ala ma ọ bụ pekarịrị maka ọtụtụ arụmọrụ onye ọrụ ọ bụla ga-arụ na ndekọ aha ha, faịlụ ha yana ndekọ na faịlụ nke ndị ọrụ ndị ọzọ. Ndị a bụ ikikere ndị a:
<° Maka faịlụ: - rw-r-- r--
<° maka ndekọ: - igwu rwx
Cheta na: ha abụghị otu ikikere maka nkesa GNU / Linux niile.
Ihe ùgwù ndị a na-enye anyị ohere ịmepụta, detuo ma hichapụ faịlụ, mepụta akwụkwọ ndekọ aha ọhụrụ, wdg. Ka anyị hụ ihe a niile na omume: D:
Ka anyị were faịlụ "Advanced CSS.pdf" dị ka ihe atụ. Rịba ama na ọ dị ka ndị a: -rw-r--r-- … Advanced CSS.pdf. Ka anyị lebakwuo anya.
Tipo ọrụ Otu Ezumike nke ndị ọrụ (ndị ọzọ) Aha faịlụ
<° Onye ọrụ nwere ike: Gụọ (lee ọdịnaya) ma dee (gbanwee) faịlụ ahụ.
Otu nke onye ọrụ ya nwere ike: Gụọ (naanị) faịlụ ahụ.
Ndị ọzọ ọrụ nwere ike: Gụọ (naanị) faịlụ ahụ.
Maka ndị na-achọ ịmata ihe na-eche n'oge ahụ ihe mpaghara ndị ọzọ nke ndepụta a nwetara site na ls -l na-ezo aka, lee azịza ya:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere njikọ siri ike ma dị nro / akara, nke a bụ nkọwa na nke ha esemokwu.
Ọ dị mma ndị enyi, anyị abịarutela akụkụ na-atọ ụtọ ma dị arọ nke isiokwu a na-ekwu ...
Iwu chmod ("Ọnọdụ mgbanwe") na - enye ohere imezigharị ihe nkpuchi ahụ ka enwee ike ịrụ ọrụ karịa ma ọ bụ obere na faịlụ ma ọ bụ ndekọ aha, na okwu ndị ọzọ, iji chmod ị nwere ike wepu ma ọ bụ wepu ikike maka ụdị onye ọrụ ọ bụla Ọ bụrụ na ụdị onye ọrụ onye anyị chọrọ iwepụ, tinye ma ọ bụ ekenye ihe ùgwù akọwapụtaghị, ihe ga-eme mgbe ị na-arụ ọrụ ahụ bụ ịmetụta ndị ọrụ niile n'otu oge.
Ihe dị mkpa icheta bụ na anyị na-enye ma ọ bụ wepu ikikere na ọkwa ndị a:
Oke Ọkwa Descripción
u onye nwe ya onye nwe faịlụ ma ọ bụ ndekọ
g otu otu nke faịlụ a
o ndị ọzọ ndị ọrụ ndị ọzọ niile na-abụghị ndị nwe ma ọ bụ otu
Nye onye nwe ya ikike igbu:
Wepụ igbu ikike niile ọrụ:
Nye ndị ọrụ ndị ọzọ ikike ịgụ ma dee:
Hapụ naanị ịgụ ikike maka otu faịlụ a:
Ikike na usoro ọnụọgụ octal
E nwere ụzọ ọzọ eji eji chmod iwu na, maka ọtụtụ ndị ọrụ, "na - enwe ntụsara ahụ", ọ bụ ezie na priori ọ dịtụ mgbagwoju anya ịghọta ¬¬.
Nchịkọta nke ụkpụrụ nke otu ndị ọrụ ọ bụla na-etolite nọmba octal, bit "x" bụ 20 nke bụ 1, w bit bụ 21 nke bụ 2, r bit bụ 22 nke bụ 4, anyị nwere mgbe ahụ:
Nchikota nke ibe na ma obu na nke obula na-enye onu ogugu abuo nke uzo, ya bu, nchikota nke ibe na:
Cheregodi Octal uru Descripción
- - - 0 ị nweghị ikike ọ bụla
- - x 1 kpere ikike naanị
- w - 2 dee ikike naanị
- wx 3 dee ma mee ikikere
r - - 4 gụọ naanị ikike
r - x 5 Gụọ ma mepụta ikikere
rw - 6 Gụọ ma dee ikikere
wnye 7 ikikere niile edoziri, gụọ, dee ma mezuo ya
Mgbe ejikọtara onye ọrụ, otu, na ikikere ndị ọzọ, ị ga-enweta nọmba ọnụọgụ atọ nke mejupụtara faịlụ ma ọ bụ ikikere ndekọ. Ihe atụ:
Cheregodi Ogwu Descripción
rw- --- -- 600 Onye nwe ya agụwo ma dee ikikere
Awụnye --x --x 711 Onye nwe ya gụrụ, dee ma mezuo ya, otu a na ndị ọzọ na-egbu
rwx rx rx 755 Ndị na-agụ, dee na igbu onye nwe ya, otu na ndị ọzọ nwere ike ịgụ ma mepụta faịlụ ahụ
igwu rwx 777 Faịlụ nwere ike na-agụ, dere na gburu onye ọ bụla
r-- --- -- 400 Naanị onye nwe ya nwere ike ịgụ faịlụ ahụ, mana ọ nweghịkwa ike gbanwee ma ọ bụ mezuo ya ma n'ezie ọ nweghị otu ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ike ịme ihe ọ bụla na ya.
rw-r-- --- 640 Onye nwe ya nwere ike ịgụ na ide, otu nwere ike ịgụ faịlụ, ndị ọzọ enweghị ike ịme ihe ọ bụla
Pụrụ iche ikikere
A ka nwere ụdị ikike ndị ọzọ ị ga-atụle. Ihe ndị a bụ ikike nnabata SUID (Set User ID), bitor SGID (Set Group ID) na bity bit nke bitin (bitin peritsi).
A na-ekenye bit nke setuid ahụ na faịlụ ndị a ga-ewepụ, ma na-enye ohere na mgbe onye ọrụ kpere faịlụ ahụ, usoro a na-enweta ikikere nke onye nwe faịlụ ahụ gburu. Ihe atụ kachasị doro anya nke faịlụ a na-agbanwu na bit setuid bụ:
Anyị nwere ike ịhụ na ekenyere bit ahụ dịka "s" na njide ndị a:
Iji ekenye bit a na faịlụ ọ ga - abụ:
Na iwepu ya:
Cheta na: Anyị ga-eji nke a bit na oke nlekọta dị ka ọ nwere ike ibute mmụba nke ihe ùgwù na sistemu anyị ¬¬.
The setid bit na-enye ohere inweta ihe ùgwù nke otu ekenyela faịlụ, a na-ekenye ya ndekọ. Nke a ga-aba oke uru mgbe ọtụtụ ndị ọrụ otu otu ga-arụ ọrụ na akụrụngwa n'ime otu ndekọ ahụ.
Iji ekenye bit a, anyị na-eme ihe ndị a:
A na - ekenye bit a na ndekọ aha nke ndị ọrụ niile nwere ohere, ọ na - enye ohere igbochi onye ọrụ ihichapụ faịlụ / akwụkwọ ndekọ aha nke onye ọrụ ọzọ n'ime ndekọ ahụ, ebe ọ bụ na mmadụ niile nwere ikike ide.
Anyị nwere ike ịhụ na ekenyere bit ahụ ka "t" na njide ndị a:
Ezi ndị enyi, ugbu a ị mara otu esi echedo ozi gị nke ọma, yana nke a, enwere m olileanya na ị ga-akwụsị ịchọ ihe ndị ọzọ Igodo mkpọchi o Nche Nchekwa na GNU / Linux, anyị achọghị ha XD.
PS: Onye agbata obi nwanne nwanne XD a rịọrọ ka eserese a, enwere m olileanya na m mezila obi abụọ gị ... 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Ikike na ikike na Linux
Ihe 45 kwuru, hapụ nke gị
Edemede mara mma, kọwara nke ọma.
Ezigbo Perseus, amaghị m banyere ikikere na usoro ọnụọgụ octal (nke bụ obere ihe na-atọ ụtọ) ma ọ bụ ikikere pụrụ iche (setuid / setgid / sticky).
M na-anwụ ụra mana nke a mere ka m bilie ntakịrị, Achọrọ m ijide njikwa ahụ 😀 +1000
Ezi ihe ọ baara gị, Ekele m 😉
okwu olu dijo
Magburu onwe ya, nkọwa ndị a doro nnọọ anya, daalụ nke ukwuu.
Ihe bit setịpụrụ na-enye gị ohere inweta ihe ùgwù
na akụkụ na e nwere obere njehie.
Zaghachi to lordix
Daalụ maka nchọpụta na ịza ajụjụ, oge ụfọdụ mkpịsị aka m "gbagọrọ agbagọ" XD ...
Emegoro m 😀
Edemede dị ezigbo mma, Perseus. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-amasị m ịme ụfọdụ ka ozi ahụ wee zuo oke:
Kpachara anya mgbe ị na-etinye ikikere iji megharịa (chmod -R) n'ihi na anyị nwere ike ịkwụsị ịnye faịlụ ọtụtụ ikikere. Otu ụzọ gburugburu nke a bụ site na iji iwu ịchọta ịchọta ọdịiche dị n'etiti faịlụ ma ọ bụ folda. Ọmụmaatụ:
Ihe ọzọ: iguzobe ikike na akwụkwọ ndekọ aha ma ọ bụ faịlụ abụghị usoro anaghị agha agha iji kpuchido ozi, ebe ọ bụ na iji LiveCD ma ọ bụ tinye diski ike na PC ọzọ, ọ naghị esiri ike ịnweta folda ahụ. Iji kpuchido ozi dị nro ọ dị mkpa iji ngwaọrụ izo ya ezo. Dịka ọmụmaatụ, TrueCrypt dị mma nke ukwuu ma ọ dịkwa okirikiri.
Na n’ikpeazụ: n’ihi na ọtụtụ ndị ọrụ anaghị agbanwe ikike faili faịlụ na Windows apụtaghị na ọ gaghị ekwe omume ịme ya. Ma ọ dịkarịa ala, faịlụ NTFS nwere ike ịchekwa dị ka EXT, amaara m n'ihi na n'ọrụ m enwere m nkebi zuru oke na-enweghị igbu ma ọ bụ ide ederede, wdg. Enwere ike ịme ihe a site na taabụ nchekwa (nke na-ezokarị). Nsogbu kachasị na Windows bụ na ntọala ndabara ya na-enye ohere ihe niile.
Daalụ nke ukwuu maka ịgbasa isiokwu ahụ;). Dị ka:
Are bụ onye ziri ezi, ọbụlagodi na Win otu ihe ahụ mere, enwere ike mgbe e mesịrị, anyị ga-ekwu maka ngwaọrụ dị iche iche na-enyere anyị aka zoo ozi anyị.
Hugo enyi kedu ka i mere 😀
Nsogbu dị na TrueCrypt ... ọ bụ ikike ya nwere ihe “iju” o nwere, ị nwere ike ịgwa anyị karịa gbasara ya? 🙂
Ekele m atụnyere
Akwụkwọ ikike TrueCrypt ga-adịtụ ntakịrị, mana opekata mpe ụdị 3.0 nke ikikere (nke bụ nke ugbu a) na-enye ohere iji onwe na azụmaahịa na-arụ ọrụ na-akparaghị ókè, ma na-enyekwa nnomi, nyochaa koodu isi mmalite, ime mgbanwe na nkesa. arụ ọrụ (ọ bụrụhaala na aha ya), yabụ ọ bụrụ na ọ bụghị 100% n'efu, n'ezoghị ọnụ ọ dị ezigbo nso.
Ochie Perseus hapụrụ anyị ndị otu egwuregwu ọjọọ na isiokwu ya maka ịbụ nke zuru ezu.
Onweghi onye no ebe a kariri onye obula? Ma dịkarịrị mma karịa m JAJAJAJAJAJAJA
hahahaha, kpachara anya, cheta na anyị nọ n'otu ụgbọ mmiri ahụ 😀
Daalụ maka ikwu 😉
Ikike, bụ ihe a na-amụ kwa ụbọchị, ọ bụghị site n'otu ụbọchị gaa na nke ọzọ, yabụ ka anyị mụọ hehehehe
Ezigbo ihe ederede Perseus.
Ndụmọdụ: ọ dịghị mkpa ide akara ngosi na akara ọ bụla, o zuru ezu iji gosi ya naanị otu ugboro. Ihe Nlereanya:
Ọ nwere ike ịdị ka ya
otu ihe ahu
o nwekwara ike ịdị ka
na-eso usoro ahụ ị nwere ike ime nke a
$ a-rwx, u + rw, g + w + ma ọ bụ ihe atụ.txt
dee: a = niile.
Chei enyi, amaghi m nke ahu, ekele maka ikesa 😀
Edemede dị mma, a kọwara ihe niile nke ọma.
Ọ dịịrị m mma karịa ịgbanwe ikike nke faịlụ ahụ octally, n'ụzọ doro anya. Achọpụtara m ya zuru oke ịghọta ụzọ ọzọ mana nke a adịla ogologo oge gara aga hahaha
Zaghachi to mortadelo_666
Ndewo ndị mmadụ, perseus; Akwụkwọ ahụ masịrị m nke ukwuu. Ọ ga-amasị m ịmekọrịta ya. Site na ịpị nick m nwere ntụaka !! haha.
M na -emepụta akwụkwọ na-adịkarị adị, ana m agbasi mbọ ike banyere SL, ihe m na-agaghị ahapu na ndụ m ọ bụrụhaala na m dịnụ ma nwee mkpịsị aka abụọ. Echere m na ha nwere email m. a mmakọ na ike na oru ngo nke yiri ka m «blọgụ n'otu!», ACA ES LA TRENDENCIA !! Nke a bụ otu esi kee web nke ọdịnihu.
Hahahahaha, o buru ihe obi uto ka i sonyere anyi, ka elav ma gaara ahu ihe i choro 😉
Lezie anya na enwere m olile anya ihu gi ebe a n'oge na adighi anya 😀
M dee gi email ugbu a (na adreesị nke i tinyere na ikwu) 🙂
Enwere m obi abụọ. Otu ị ga - esi tinye ikikere na ndekọ aha yana ihe ndị a anaghị agbanwe agwa ha, agbanyeghị onye ọrụ na-agbanwe ha, gụnyere mgbọrọgwụ.
Enwere ike Akụkọ a M dokwuo anya a bit ..
Edere ederede a nke ọma, ekele maka ịkekọrịta ihe ọmụma
Kedu otu o siri baa uru, anyị nwere olile anya ịhụ gị ebe a ọzọ. Ekele 😉
Obi dị m ezigbo ụtọ na ọ baara gị uru, ekele 😉
Eziokwu anaghị m ekwenye na Linux na-ebugharị faịlụ na folda sistemụ bụ isi ọwụwa. ị ga-enye ikike maka ihe niile ma tinye paswọọdụ gị. na windo na-ebugharị faịlụ dị mfe, ọbụlagodi na folda windo ahụ. a dum usoro ịkwaga faịlụ na nchekwa na Linux mgbe na windo ọ dị mfe idetuo na mado. Ana m eji sistemu eji arụ ọrụ. mint 2 Maya cinnamon na windo 13
M na-eji Linux afọ ole na ole ugbu a, na eziokwu na m nwere nsogbu ndị a ruo oge ụfọdụ.
Enwere m ike ịmegharị faịlụ / folda na-enweghị nsogbu ọ bụla, enwekwara m nkewa HDD na 2. N'ụzọ doro anya, iji nweta mpaghara nke ọzọ na oge 1 m ga-etinye paswọọdụ m, mana agaghịkwa ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu a na-adịghị ahụkebe, gwa anyị, anyị ga-eji obi ụtọ nyere gị aka 😉
Dezie ederede dika akụkụ Linux. Na nkwupụta gị gbasara ijikwa ikikere na Windows: don't maghị etu esi edozi ikike. Njikwa nke ike ndị a dị elu karịa (ma ewezuga na nsụgharị 16 bit, Windows 95, 98, M na ekwentị mkpanaaka) otu esi ejikwa ha na sistemụ penguuin na nke ọmarịcha granularity, yana maka ndekọ na m na-eme ma sistemụ arụmọrụ ọ dịghị manias megide onye ọ bụla n'ime ha.
Ndụmọdụ m: mee obere egwu ala, ị ga-amata, ọ nweghị mmemme mpụga achọrọ ma ọlị. Maka ihe niile dị mma. 😉
Ezigbo ederede. Isiokwu banyere ikikere bụ ihe na-adọrọ mmasị ịmụ. O meela m otu ugboro ka m ghara inwe ike ịnweta faịlụ na ogologo ụzọ, n'ihi na anaghị m eme ikikere n'otu n'ime akwụkwọ ndekọ aha. Ọ dịkwa mma ịmara ma ọ dịkarịa ala ịdị adị nke ikikere pụrụ iche dị ka bit Sticky.
PS: Anọ m na-eso blog oge ụfọdụ mana edebanyeghị m aha. Ha nwere ederede mara mma ma ihe dọtara uche m bụ ọgwụgwọ n'etiti ndị ọrụ. E wezụga eziokwu na enwere ike ịdị iche, n'ozuzu, onye ọ bụla na-anwa inyere ibe ya aka site na ịnye ahụmịhe ha. Nke ahụ bụ ihe dị ịrịba ama, n'adịghị ka saịtị ndị ọzọ jupụtara na trolls na flamewars 😉
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, mana m mụtara ya n'ụzọ dị iche iche banyere ikike, kama na Octal, na ọnụọgụ abụọ, nke mere na ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, "7" bụ 111, ọ pụtara na o nwere ikikere niile, yabụ ọ bụrụ na i tinye 777 ọ ga ị na-enye ndị ikikere ikike niile, ndị otu ...
Kemmasi, nkenke, doo anya na na isiokwu.
Kedu ezigbo isiokwu, ekele na ekele maka nkọwa niile… ..
Woow ọ bụrụ na m mụta ọtụtụ ihe na nkuzi gị, ọ dị m ka obere ahịhịa na nnukwu ubi a bụ Linux, mana na-egbochi ihe Hugo kwuru n'otu oge, n'ahịrị a ma ọ bụrụ na anyị etinye cd ndụ ma ọ bụrụ na faịlụ anyị ezighi ezi E nwere bụ n'ezie na-adịghị ihe dị ukwuu iji chebe, Ọzọkwa na Windows m na-eche na e nwere abụghị ọtụtụ nsogbu na-eke ihe nchịkwa ọrụ na a mmachi akaụntụ n'ime mmeri sistemụ ma si otú chebe gị nchịkwa data data…. Ma kelee gị nke ukwuu maka edemede a, amam ihe karịa n'okwu a maka gị ...…
Eziokwu bụ na achọrọ m ịgba ọsọ xD ma gwa m ikikere agọnyere mgbe m mepere ma na-ede faịlụ x mana m gụrụ obere ebe a wee mụta ihe ma ọ rụ ọrụ iji hụ ikikere folda ahụ nwere faịlụ ahụ na ndị kpere ya nwere ihe ikpeazụ m chetara na Emere m na achọrọ m ịbanye na folda yana dịka aha ahụ dị ogologo m gbanwere ya na n'etiti xD ​​dị mfe, mgbe ahụ, m lere anya na ikikere ma lelee ihe kwuru banyere adm m gara faịlụ m tinyere akụrụngwa wee họrọ ihe kwuru adm mgbe ahụ na-enweghị wepụ ihe onwunwe Tinye folda ahụ wee rụọ ọrụ ahụ na ọ nwere ike ịmalite n'enweghị nsogbu ugbu a ihe m na-amaghị bụ ihe m mere xD eziokwu bụ, amaghị m na ọ bụ n'ihi na m gbanwere aha folda ahụ mana amaghị m na ekele enwere m ike igbu ya Nsogbu adịghị.
Ndewo m nwere ajụjụ ụfọdụ,
Enwere m sistemụ weebụ nke ga-ederịrị ihe oyiyi na ihe nkesa Linux,
nkọwa bụ na ọ naghị ekwe ka ịdebanye aha ya, gbalịa ịgbanwe ikikere mana ọ nweghị ike,
Adị m ọhụrụ na nke a, n'ihi na m ga-achọ ka ị duzie m, daalụ.
Gaa na ọ bụrụ na ọ nyeere m aka, daalụ nke ukwuu maka onyinye ahụ.
Onwe m, akwụkwọ ndị ahụ nyeere m aka ịmụ, nke etinyere n'ọrụ na ọrụ m.
Omume ndị m mere bụ na Debian. Ekele na ekele.
Mmụọ ozi Yocupicio dijo
Ezigbo nkuzi na ikikere na GNU / Linux. Ahụmịhe m dịka onye ọrụ Linux yana dị ka onye nchịkwa nke sava dabere na ụfọdụ nkesa GNU / Linux bụ na ọtụtụ nsogbu ọrụaka nwere ike ibilite dabere na njikwa nke ikikere maka otu na ndị ọrụ. Nke a bụ ihe ekwesiri iburu n'uche. Ana m ekele Perseus na blọọgụ ya ma enwere m mmasị ịbanye na ndị agha GNU na blog a. Ekele si Mexico, ndị ibe!
Zaghachi Angel Yocupicio
Ndewo, nke mbụ, ana m ekele gị na isiokwu a dị mma ma ana m akpọtụrụ gị enwere m okwu a: 4 ———- 1 mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ 2363 Feb 19 11:08 / etc / onyinyo nwere 4 n'ihu ka a ga-agụ ikike ndị a.
Windows: Anyị na-ahọrọ folda, bọtịnụ ziri ezi, ihe onwunwe> Nche taabụ, ebe ahụ ị nwere ike itinye ma ọ bụ hichapụ ndị ọrụ ma ọ bụ otu, na nke ọ bụla na-etinye ikikere ịchọrọ (gụọ, dee, njikwa zuru oke, wdg). Amaghị m ihe hell ị na-ekwu
Site n'ụzọ, m na-eji Linux kwa ụbọchị, ana m eji elementrị, dabere na ubuntu.
Gaa nke ọma
magburu onwe ya na ya kacha mma akọwapụtara ederede
Ezigbo onyinye, ọ nyeere m aka nke ukwuu.
Zaghachi Jorge Painequeo
Nwa nkita anaghi aru oru.
teknụzụ kọmputa dijo
Olee otú ọtụtụ n'ime unu chọpụtara na mgbe anyị na-anọdụ ala n'azụ a "Windows" kọmputa Nke ahụ bụ kpamkpam ụgha, n'ihi na ebe ọ bụ na Windows NT, ọbụna tupu Windows 98 na na nsogbu na ị nweghị nchebe bụ ụgha kpamkpam.
Nche na Windows bụ ihe Microsoft ejirila kpọrọ ihe maka ihe kpatara ya ọ bụ sistemụ arụmọrụ desktọọpụ kachasị n'ọtụtụ ebe taa.
Edere isiokwu a nke ọma banyere ikikere nke GNU / Linux mana ị gharịrị dịka ọ na-eme n'isiokwu ndị a mgbe niile na onye na-ede ya anaghị eji Windows ma ọ bụ na ọ maghị etu esi eji ya n'ihi na ha enweghị mmasị na ya ma nweta nyocha na-adịghị mma.
Ihe ekwesiri ikwusi ike bu na Windows di nchebe na faili ya na ACL (Access Control List) nke o na-eburu ya na Windows site na Windows NT nile nke na eme ka sistemu faili di nchebe. Na GNU / Linux ha tinyekwara ya.
Ebe ọ bụ na Windows Vista ahụ (Akaụntụ Akaụntụ Njikwa) UAC atụmatụ etinyere ma mee ka ọ dị mma iji Windows na-enweghị ịbụ onye nchịkwa iji ya nke ọma.
Maka m ezigbo atụmatụ ha mejuputara n'ihi na iji Windows XP dịka onye ọrụ na-enweghị ikikere nchịkwa kwere omume, mana n'ụlọ onye jiri ya dị ka nke ahụ? o siri ike onye ọ bụla n'ihi otú o si bụrụ ihe na-adịghị mma n'ihi enweghị ihe dịka UAC.
Gịnị ma ọ bụrụ na o doola m anya na onye ọ bụla dere edemede ahụ amatala ihe ọ na-ede n'agbanyeghị na ọ kọwaghị GNU / Linux ACL.
TuxInfo Magazine Nro. 44 dị njikere maka nbudata
Infographic: Ọdịnihu nke Ekekọrịta faịlụ mgbe emechiri Megaupload